ရေပါတာမလိုချင်ဘူး…ရေဗူးပေါက်တာပဲ လိုချင်တယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရေပါတာမလိုချင်ဘူး…ရေဗူးပေါက်တာပဲ လိုချင်တယ်…
Posted by johnnydeer on Dec 6, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
မေတ္တာသုတ်ရွတ်ရင် ရိုက်ပစ်..ဖမ်းပစ်…မီးလောင်တိုက်သွင်းပစ်..အက်စစ်လေးနဲ့ကော ပြုစုလိုက်ဦး…. ပါးစပ်ညောင်းလို့ကွာ လျှောက်ရွတ်နေကြတယ်…
ဗီနိုင်းကိုင်ဆန္ဒပြတာလောက်ဆိုရင်တော့ မြို့လယ်ခေါင် တရွတ်တိုက်ဆွဲယုံလောက်ပဲ ဖမ်း….
ရန်ကုန်ကနေ ရွှေတွင်းလမ်းလျှောက်ပြန်မှာလား…ခြေညောင်းနေမှာပေါ့…ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးလိုက်လေ…မလိုက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့လူ တုတ်ကလေးနဲ့ ခပ်စပ်စပ် ရိုက်ပေးလိုက်…ဒီလောက်စေတနာထားနေတာကို….
့် မရှိရင် ဆန္ဒမပြရဘူးနော်…နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေတယ်…ပြချင်ရင် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်း…အထက်ကိုတင်ပြခိုင်း..အဲ…ကျချင်မှတော့ ကျမယ်…
ညူကလီးယားလုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေလား…အဲ့ဒါ ကုမ္မဏီက သူ့ဘာသာသူ သွင်းတာလေ.. နိုင်ငံတော်နဲ့ ဘာဆိုင်လဲ…
အခွန်မဆောင်တဲ့ ဒီဇယ်တွေမိတယ်…ဟုတ်လား…ပစ္စည်း အရေးယူလိုက်လေ…ပြီးရင် ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်…ကုမ္မဏီ ကိုတော့ ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့…
ဘာ…လွှတ်တော်အမတ်က သူ့အဖေကော ..အမေကော နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး…သူက ဘယ်လို နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ရနေတာလဲ….ထားလိုက်တော့…ငါတို့ပါတီကလေကွာ…
ခေါင်းခြောက်မယ့်ဟာတွေ…ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့်ဟာတွေဆို…ဟိုမိန်းမ ကိုခိုင်း..ကြားလား…မရှင်းတာရှိသေးလား….ပြီးမှ…လိုတာ ထပ်ပြောမယ်….
လက်ရှိ ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေကလည်း
ငါ့နှယ် ဘုန်းကြီးဝတ်မယ် ကြံပြန်တော့လည်း
မြန်မြန် ဒီဝဋ်က ကျွတ်အောင်
ဟိုထဲကလို ဆုတောင်းလိုက် ချင်ပေမယ့်လည်း
အနိစ္စ ၊၊၊၊ ဒုက္ခ ၊၊၊၊၊ အနတ္တ ၊၊၊၊၊
ခုမှပဲ ကြိုးကိုင်သူ အစစ်အမှန်ကို တွေ့တော့တယ်။
နွားကျောင်းသွားတုန်း ကြိုးကိုင်တာကို ပြောတာပါ။
ကြိုးကိုင်ပြီး ဆွဲရတာ မောတယ်တဲ့
ခု ကြိုးမကိုင်တော့ဘူး.. ချွန်းပဲကိုင်တော့တယ်..
“ရေဗူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး.. ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်..”. ဆိုတာ…
မဆလခေတ်မှာ.. တိုင်းပြည်မွဲပြာကျသွားတာရဲ့.. အဓိကအကြောင်းရင်းတခုပေါ့..
စစ်တိုက်တတ်တဲ့သူတွေက… သူတို့ရဲ့.. စစ်စရိုက်တွေလူထုထဲရိုက်သွင်းပြီး.. လူတွေကို.. အလုပ်လုပ်တာမှာ.. ပရိုကျကျ.. စနစ်တကျမလုပ်စေပဲ.. ပြီးပြီးရောအကျင့်စရိုက်မွေးထုတ်စေခဲ့တဲ့.. စကားလေ..။
အခုစာရေးသူ ဘိုးတော်ကတော့…” ရေပါတာမလိုချင်ဘူး…ရေဗူးပေါက်တာပဲ လိုချင်တယ်… “တဲ့..
ဖက်ဆစ်ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ လက်သုံးစကား ဆိုပါတော့…..
ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့အမွေခံတွေ အင်မတန် ခံတွင်းတွေ့တဲ့ စကားပေါ့….။
တကယ်တော့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံက အင်္ဂလိပ်လက်က လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တာ
စစ်တပ်ကို အင်္ဂလိပ်ပုံစံသာသွင်းခဲ့ရင် ဒီတိုင်းပြည် ဒီလိုမဖြစ်ဘူး…
အဲလို အစကောက်ရရင် ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယ (common wealth) အဖြစ်က ခွဲထုတ်လွပ်လပ်ရေးယူခဲ့တာကိုကမှားတာ…
အဲဒီအစကိုဆက်လိုက်ရရင် ကိုယ့်နာမည်ထင်ပေါ် လူပြိန်းကြိုက်ပြီး(လူပြိန်းဆိုတာလူများစုလေ) ဟီးရိုးလုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အမှားလို့ကိုစွပ်စွဲချင်သေးတာ……
တိုင်းပြည်အခြေအနေကတော့ ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး…ရေပါတာ လိုချင်တယ်…ဆိုတဲ့ အခြေအနေကနေ ရေပါတာ မလိုချင်ဘူး…ရေဗူး ပေါက်တာပဲ လိုချင်တယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေကိုတောင် ရောက်နေပြီထင်တာပဲ…ကိုယ့်တိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ထားနဲ့စေတနာတွေကတော့ တကယ် အောချရလောက်ပါပေတယ်…ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြီးနဲ့များ ဖျက်နေသလားတောင် ထင်ရတယ်..
တော်တယ်ဗျာ နာမည်တွေချရေးမထားပဲနဲ့ ဟိုဘက်က ပြောတဲ့သူနဲ့ ဒီဘက်က နားထောင်တဲ့သူ တွေရဲ့ မျက်နှာ ကြီးတွေ မြင်ယောင်လာလိုက်တာများ။
ဂျော်နီဒီးယားက မန်းစက်မှု အမ်အိုင်တီကလား၊ ကျနော်က ဝိုင်အိုင်တီကျောင်းဆင်းပါ၊ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာတယ်။ လိုတာရှိပြောနော် ဒီရွာမှာ ကျနော်က ဘိုပဲ…။ အိန္ဒိယဆို မရောက်ခြင်မှအဆုံး..။ ဒါဗျဲ….
အော် ရေဗူးပေါက်တွေလည်း အသုံးတည့်သည့် ခေတ်တောင်ရောက်နေပြီလားဟင်။
“ရေပါတာမလိုချင်ဘူး…ရေဗူးပေါက်တာပဲလိုချင်တယ်”ဟု သွယ်ဝိုက်စွာဖြင့် ဒဲ့ဒိုးရေးသွားသော “၀င်္ကဒုတ်ထိ” အလင်္ကာမြောက်ရသအား ၀င်ရောက်အားပေးဖတ်ရှုသွားပါသည်။
ရေဗူးပေါက်မှ တော့ ရေပါနိုင်အုံးမလားကွယ်ရို့ ..
တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်လေ ..(ဦးနှောက်ကတော့ တယ်ကောင်းပဲ ) …
တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် အကောင်းတွေက အစုတ်ဖြစ်ချောင်ထိုးခံရချိန်မှာ
ko ၀ီစကီ says:
တိုက်ဆိုင်တယ်ပြောရမှာပဲ။ မနေ့ညက ဦးလေးနဲ့လေကန်ရင်း အဲ့ဒီရေဗူးပေါက်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာ။ ဒို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေများ တော်တော်ကိုဦးနှောက်မရှိတာပဲလို့ပေးလိုက်တဲ့စကားပုံတွေကလဲ တလွဲ
“ရေဗူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး.. ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်..” ဆိုတော့ကာ… ရေတ၀သောက်ပြီး သေးပေါက်ပေး
ဂျောနီရေ စည်းကမ်းချက် ၁၀ လေးသတိ့ရဟ့ ဘင်္ဂလားက ဘလော့ကာ ကောင်လေးပြောတဲ့ စကားလေးလည်းသတိ့ရပါကွာ (ဂေဇက်က ဘာဆိုဒ်ဆိုလား)ကွန့်မန်တွေကတော့ ငါ့လူ ကိုယ်တိုင်မပြောရဲတဲ့စကား တစ်ခြားလူပြောနေရင် ကုန်းဆင်းကို စကိတ်စီးပေးလိုက်ကြမှာပဲ ဘိုးတော်ဝန်ခံချက် ကတည်းက ငါ့ညီ ကိုယ့်တွေ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ….လုပ်ပါ စိတ်ချမ်းသာသလိုပေါ့ ပြောလိုက်ရတော့ ရင်ထဲပေါ့တာပေါ့ ငါ့ညီရာ..ဒါပေ့မယ့် လွမ်းစရာရှိ့ရင် ကိုယ်ပဲ လွမ်းရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်စေ့ချင်တာပါ…ကဘုန်းကျော် ကို အတု့ယူနော် ရေးချင်သပါ့ဆို နှာစေးနေတာကောင်းပါတယ် ငါ့ညီရာ
ပို့စ်မှစာသားများရော ကွန်မန်း မှစာသားများကိုရော